Axmed Siilaanyo oo doonayo inuu Maraykanka kula kulmo Prof: Axmed Ismaaciil Samatar – idalenews.com
Axmed Siilaanyo oo doonayo inuu Maraykanka kula kulmo Prof: Axmed Ismaaciil Samatar
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo Wafdi uu Hoggaaminaayo oo looga yeeray Dalka Maraykanka ayaa waxaa la filayaa inu Socdaalkiisi inta uu ku guda jiro ugu faa’iideysto Kulan uu la qaadan doono Prof: Axmed Ismaaciil Samatar.
Dadyowga iyo Maamulka Somaliland, ayaa iyagu ah kuwa aaminsan in Prof: Axmed Ismaaciil Samatar, uu geystay Dhibaato, waxaana la filayaan in Axmed Siilaanyo iyo Wafdiga ula kictimi doono Maraykanka ay ahmiyad gaar ah siin doonaan la kulanka Prof: Axmed Ismaaciil Samatar.
Prof: Axmed Ismaaciil Samatar, oo ah Ruux Siyaasi isla markaana aaminsan Mabda’a Somali-weyn, ayaa waxaa uu iminka Doonayaa Axmed Siilaanyo inuu Samatar ka dhaadhacsiiyo Mab’da Somaliland hadii uu arintaa ku gacan seyro uu Axmed Siilaanyo dib usoo celin doono dembiyadii lagu soo oogay.
Maamulka Siilaanyo ayaa iyagu ka careysan Codsi dhawaan ay Xukuumadda Somalia u dirtay Dowladda Maraykanka taasoo looga codsanaayay inay cafis u fidiso Prof: Axmed Ismaaciil Samatar, oo ay Somaliland ku eedeysay Dambiyo aan sal iyo baar lahayn.
Si kastaba ha ahaatee, Axmed Siilaanyo ayaa doonaya inuu Siyaasad qabya ah ku beero Prof: Axmed Ismaaciil Samatar si uu ugu biiro Maamulka uu isagu liijaanka u hayo.
(DAAWO SAWIRADDA). 197 Sarkaal oo Tababar loogu soo xiray Jibouti
Boliska Dalka Canada oo ku soo baraarugay Falkii is qarxinta ee Muqdisho